के तपाई लाई खाने बित्तिकै पेट दुख्ने समस्या छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय – Superhit News
के तपाई लाई खाने बित्तिकै पेट दुख्ने समस्या छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
पेट दुख्ने समस्या नभएका मानिस सायदै होलान्। गम्भीर रुपमा होस् या सामान्य प्रकारको नै किन नहोस् पेट दुख्ने समस्या सबै मानिसले भोगेका हुन्छन् । कसैकसैमा पेटकै रोगका कारण पेट दुखेको हुन सक्छ भने केहीमा खानपिनमा हुने गडबडीका कारण पेट दुख्छ। खानपानमा गडबडी हुँदा पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, डकार आउने, वान्ता हुने, खाना खानेबित्तिकै दिसा लाग्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन्। यहाँ खाना खानेबित्तिकै पेट दुख्नुका कारण र त्यसका रोकथामका उपायबारे चर्चा गरिएको छ।
१ . भाइरल इन्फेक्सन : पेटमा ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सन छ भने पेट पहिले फुलेको हुन्छ। यो इन्फेक्सन भएको अवस्थामा पनि थोरै खाना खाँदा पेट दुख्न थालिहाल्छ।
२ . अल्सर : अल्सर भएर खाना जाने नली (पाइलोरिक रिङ) साँघुरिएको भएमा पनि खाना खाँदा पेट दुख्ने गर्छ। यसले गर्दा पेट ढाडिँदै आउँछ र पेट नराम्रोसँग दुख्छ ।
३ .पेटको श
ल्यक्रिया : क्यान्सर/अल्सर भएर पेटको आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको वा कुनै अंग काटिएको भएमा पेटको भाग साँघुरो भएको हुन्छ। यस्ता बिरामीको पेटमा थोरै खानेकुरा पर्दा पनि ढुस्स भएर फुल्छ र दुखाइ बढ्छ ।र यसबाट बच्ने उपाय पनि निम्न अनुसार छन्
१ . चना, केराउजस्ता गेडागुडी खाँदा एक दिन भिजाएर राख्ने र अर्को दिन सफा गरेर राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने।
२ . नियमित व्यायम गर्ने।
३ . साँधेको, पोलेको, तारेको मासुका परिकार सकेसम्म नखाने।
← गर्मीको समयमा घाम बाट छालालाई जोगाउने यस्ता छन् उपाए
औषधीको प्रयोग बिनै दिमाग तेज बनाउने यस्तो छ तरिका… →